एनआरएन अस्ट्रियामा नयाँ कार्यसमिति | Infomala
एनआरएन अस्ट्रियामा नयाँ कार्यसमिति
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआएन अस्ट्रियाको निर्वाचन मंगलबार सम्पन्न भएको छ । १३ पदका लागि उम्मेदवारी आह्वान गरिएकोमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा मात्र निर्वाचन भएको छ भने बाँकी पदमा निर्विरोध चयन भएको छ ।
अध्यक्षका लागि भएको निर्वाचनमा बुद्धिबहादुर तामाङलाई पराजित गर्दै डा. समीर केसी विजयी हुनुभएको छ । त्यस्तै उपाध्यक्षमा डा. मधुुसूदन आचार्यलाई पराजित गर्दै मुक्त गुरुङ विजयी हुनुभएको छ । त्यसैगरी निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा सचिवमा डा.दीपक ढुंगाना, उपचिवमा सुुरेन्द्रकुमार मण्डल, कोषाध्यक्षमा जीवनजंग कुँवर र उपकोषाध्यक्षमा छविलाल सापकोटा रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरुमा रविचन्द्र भट्टराई, श्रीमती अन्जना आचार्य, लक्ष्मण भुजेल, प्रदीप ढुंगाना, यमु मानन्धर र सुरज राई निर्विरोध भएका छन् ।
नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई मंगलबारै एनआरएन अस्ट्रियाकाका पूर्व अध्यक्ष डां श्याम उपाध्यायले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो । निर्वाचनका लागि प्रभु श्रेष्ठ, शिला आचार्य र रुद्र चूडाल सम्मिलित निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो ।
Previous Postबुल्गेरियामा पनि एन.आर.एन. सँघको राष्ट्रिय कमिटी गठन
Next Postरुँदै अमेरिका छाडेर नेपाल फर्किन्, गौरी मल्ल